Guinot Clean Logic Cream Milk 150ml
အရေးအကွောငျးကငျးစငျပွီး အသားရကွေညျလငျသနျ့စငျစဖေို့ အတှကျ Clean Logic Cleansing Cream
Anti-agening အာနိသငျပါဝငျတဲ့အတှကျ အရေးအကွောငျးနှငျ့အသားရလြေော့တှဲမှုကို လြော့ခပြေးနိုငျသညျ
Cleansing cream ကတော့ make-up ဖကျြအနနေဲ့ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ
Guinot Mini-Lift Serum 2ml
Guinot ရဲ့ Mini-Lift အား Moisturizer လိမျးပွီးသညျ့အခါတှငျ လိမျးပေးခွငျးဖွငျ့
Photo Shooting, Anniversary အစရှိတဲ့ အရေးကွီးပှဲမြားတှငျ အသားအရအေား အခြိနျတိုအတှငျး တငျးရငျးကွညျလငျစိုပွစေပွေီး မိတျကပျသားအား ကွာရှညျခံလှပစပေါသညျ။
လထေုနှငျ့ ဖုနျ့မှုနျ့အညဈအကွေးကွောငျ့ အသားအရပေကျြဆီးမှုမြားကို ထိနျးသိမျးကာကှယျပေးပွီး Oxygen ဓာတျဖွညျ့တငျးပေးသညျ
အသကျအရှယျကွောငျ့ဖွဈပျေါလာသညျ့ အရေးအကွောငျးမြားအား သိသိသာသာ လြော့ပါ;စပွေီး နုပြိုတငျးရငျးစသေညျ။
Newhite Vitamin C Brightening Serum မှာ Day / Night အသုံးပွုနိုငျပွီး 14 ရကျဆကျတိုကျမပွတျအသုံးပွုပေးခွငျးဖွငျ့ အသားအရကေို နဂိုထကျသိသိသာသာကွညျလငျစပွေီး အမဲစကျ၊တငျးတိတျရှိသူတို့အတှကျ အမဲစကျမြား ပါးလာစပွေီး အသားအရကေို ညီညာစသေညျ။
This potent serum lightens and evens out the complexion, acting intensely on brown spots while protecting against free radicals.Skin Type:Dark Spots and Uneven Skin Tone
Treatment Type:14 Day Treatment
Guinot Clean Logic Lotion 200ml
အရေးအကွောငျးကငျးစငျပွီး အသားရကွေညျလငျသနျ့စငျစဖေို့ အတှက Cleansing Toning Lotion
Guinot Stick Anti UV SPF 50+ 8g
"Spf ပါဝင်တဲ့ Sun Cream လိမ်ပြီးတိုင်း နေလောင်ဒဏ်အများဆုံးခံရပြီး Sensitive နေရာများဖြစ်တဲ့ နှာခေါင်း၊ နှုတ်ခမ်း၊ ပါးရိုးတစ်လျှောက် နဲ့ နားရွက်နေရာလေးမှာ Stick Anti UV SPF 50+ လေးကို အဓိကထားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။
•Sun Care for Sensitive Areas (lips, nose, cheeks). Provides invisible and intense protection.
•The first sun protection concept which incorporates DNA molecules, in addition to sun filters.
•Their role is to absorb and neutralise the UV rays
>Directions for use: Apply locally, directly onto sensitive areas (nose, lips, cheekbones, ears), alone or in addition to another sun protection product."
Guinot Sun Logic Longue Vie Soleil Body 150ml
"Boosts the skins natural defenses to effectively neutralize the harmful effects of UV light and prevent signs of aging. When applied after sun exposure, the skin will feel soothed and nourished. It also helps to enhance and prolong the tan.
♦နေရောင်နှင့်မထိခင် အသားအရေကို Defense ကောင်းမွန်စေရန် ကူညီပေးပြီး နေရောင်ခြည်ကြောင့် ပျက်ဆီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
♦နေလောင်ဒဏ်ကြောင့် ပျက်ဆီး သွားသော အသားအရေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်သကဲ့သို့ အရေးအကြောင်းများကိုလည်း လျော့ပါးစေသော2In 1 After Sun Milk ဖြစ်သည်။"
♦နေရောင်နှင့်မထိခင် မျက်နှာအသားအရေကို Defense ကောင်းမွန်စေရန် ကူညီပေးပြီး နေရောင်ခြည်ကြောင့် ပျက်ဆီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
♦ နေလောင်ဒဏ်ကြောင့် ပျက်ဆီး သွားသော အသားအရေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်သကဲ့သို့ အရေးအကြောင်းများကိုလည်း လျော့ပါးစေသော2In 1 After Sun Cream ဖြစ်သည်။"
Guinot Anti Ageing Sun Spray Body SPF 30 150ml
"Anti-Ageing Sun Mist
Body High Protection SPF 30
Protects against the harmful effects of UVA and UVB ray. Apply the sunscreen products before exposure . Re-apply frequently to maintain protection , especially after perspiring , swimming or towelling.
နေလောင်ခံ Cream လိမ်းပြီးသည့်အခါတွင် Body Setting Spray အနေဖြင့် အသုံးပြုပေးနိုင်သည်။ ရေကူးပြီးချိန်နှင့် ချွေးထွက်သော အခါမျိုးတွင်လည်း Sun Cream အာဏိသင်ပြယ်သွားမှာစိတ်ပူစရာမလိုပဲ Spray Type ဖြစ်သဖြင့် လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Anti Ageing Sun Spray လေးက SPF 30 Body High Protection & Anti Ageing Effect ပါဝင်ပါတယ်။
"Danger: Extremely flammable aerosol. Pressurised Container: may burst if heated.Keep away from heat,hot surface.Do not spray on an open flame. Keep out of reach of children.Protect from sun light.Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.
Guinot Anti Ageing Sun Cream SPF-30 50ml
" Fights photo-aging by preserving the skin and protecting it against sunburn. This cream helps prevent aging due to it’s broad-spectrum sun protection.
SPF 30 ပါဝင်ပြီး နေလောင်ဒဏ်မှကာကွယ်ပေးနိုင်သကဲ့သို့ အသက်အရွယ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသော အရေးအကြောင်းများကို သက်သာစေသည့်2in 1 Sun Cream ဖြစ်သည်။"
Skin Type:All Skin TypesTreatment Type: Apply as Needed
"•Acts on adipose and fibrous cellulite.
•Visibly firms skin.
•Smoothes dimples and reduces the skin's orange peel appearance
အဆီပိုများ၊ အဆီခဲများအား သဘာဝအတိုင်း ချေဖျက်ပေးပြီး လျော့တွဲနေသော အသားအရေများကိုပါ ပြန်လည်တင်းရင်း ကျစ်လစ် သွယ်လျှစေသည်။
15 ရက် အတွင်း သိသာသော ရလဒ်ကို မြင်တွေ့နိုင်သော Slimming Cream ဖြစ်သည်။
စိုပြေချောမွေသော အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။"
Guinot Mirific Shower Gel 300ml
Guinot Moisturizing Shower Cream 400ml
"The Hydrazone Shower Cream isamoisturizing cleanser for the body. The skin will feel clean, soft and smooth after each use.
ရေဓာတ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းပစေသည်။"
"Skin Type:All Skin TypesTreatment Type: Use Daily: Morning and Evening
Argan Oil - soften and nourish.
Coconut - moisturizes and soothes the skin."
"Easy body scrub removes dry dull surface cells while promoting cell renewal and moisturizing skin.
ဆဲလ်အသေးများအားဖယ်ရှားပေးပြီး ဆဲလ် အသစ်များကို ဖြစ်စေသည်။
အသားအရေ ညစ်ခြင်းကို သက်သာစေပြီး စိုပြေချောမွေ့စေသည်။"
Guinot Easy Body Scrub 400ml
မျက်နှာပေါ်ရှိ ဆဲလ်သေများနှင့် အညစ်အကြေးများကို အထိရောက်ဆုံးဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး အသားအရေအားပြန်လည် ကြည်လင်စေပါသည်။
Biological Peeling Gel အား Fruit Acids and Green Tea အစရှိသော သဘာဝ ပစ္စည်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီး မျက်နှာပေါ်ရှိ ဆဲလ်သေများနှင့် အညစ်အကြေးများကို အညင်သာဆုံး ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ Sensitive ဖြစ်တတ်သော အသားအရေအတွက်ပါ အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေပါတယ်။
"Skin Type: Sensitive, All Skin Types
Guinot Firming Vital Neck Care 30ml
Guinot Tre`s Homme After Shave Balm 75ml
"This moisturizing, soothing and refreshing after-shave balm instantly calms skin made sensitive by shaving. It also protects, smoothes and softens the skin.
အမျိုးသားများ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ပြီးသည့်အခါတိုင်းတွင် ကျိန်းစပ်မှုမရှိပဲ အသားအရေအား ချော့မွေ့ လန်းဆန်းကြည်လင်စေပြီး Moisture ဓာတ်ပြည့်ဝစေသည်။"
"Skin Type:All Skin Types(For Men)
Sepicalm (Potassium & Magnesium) - to calm sensitive skin.
Menthol - soothes and calms.
Witch Hazel Extract - tones.
Vitamin E - anti-free radical and antioxidant properties."